बालुवाटारमा ओली पक्षधरको भेला, सचिवालय बैठकमा बहुमत कसको देखिएला? – HostKhabar ::
बालुवाटारमा ओली पक्षधरको भेला, सचिवालय बैठकमा बहुमत कसको देखिएला?
काठमाण्डौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । मंगलबार सचिवालय बैठक बस्ने भनिएपनि प्रधानमन्त्री एवं केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले सहमति गरी आजको लागि बैठक सारेपछि केही बेर अघि बैठक शुरु भएको हो ।
सचिवालय बैठक बस्नु पूर्व बुधबार दिउँसो आफू पक्षीय सांसदसँग प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा छलफल गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद मध्ये एक मात्र लिन अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दबाब दिएपछि पार्टीभित्र गणितिय जोडघटाउ सुरु भएको हो ।
सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन सकिन विश्वाससहित सांसदहरुसँग सामूहिक र व्यक्तिगत संवाद थालेको बुझिएको छ । आवश्यक परे काठमाण्डौं बाहिर रहेका ओली पक्षका सांसदहरुलाई काठमाण्डौं बोलाउने तयारी रहेको समेत बताइएको छ ।
ओली पक्षका सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री निवास बोलाएर हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको भैसेपाटी गठबन्धनका नेताहरुले पनि आफूपक्षीय सांसदहरुको हस्ताक्षर गराएका छन्।
उनीहरुले आवश्यक परे उक्त हस्ताक्षर देखाउने तयारी गरेको एक सांसदले जानकारी दिए। ती सांसदका अनुसार गठबन्धनपक्षका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा रहेको समेत दाबी गरे।
सचिवालय बैठक बालुवाटारमा सुरु भइसकेको अवस्थामा दुवै पक्षले यस अघि नै आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्नुलाई नेकपाभित्रको विवादले अव प्रष्ट गुटको खाका तय गर्ने धेरैको तर्क छ।
सचिवालय बैठकमा कुनै सहमती नभए र स्थायी समितिको बैठकको मिति नतोकिए उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्नको लागि सांसदहरुको हस्ताक्षर सुरु गरिएको दुवै पक्षका सांसदले बताएका छन् ।
पार्टी कमिटीमा बहुमतमा रहेको दाहाल र नेपाल समूह संसदीय दलमा रहेका आफ्ना सांसदहरु सुरक्षित गर्न सकेमात्रै पनि प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बनाउन सकिने विश्वासमा छ ।
आ–आफ्नो रणनीतिमा अगाडि बढेका ओली र दाहाल नेपाल दुवैपक्ष यतिबेला आफ्नो समूहमा रहेका सांसद सुरक्षित गर्ने र अर्को समूहका सांसदलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर आफूतिर ल्याउने योजनामा छन् । त्यसैले दुवैपक्ष अहिले व्यक्तिगत र सामूहिक भेटमा लागेका छन् ।
संसदीय दलमा बहुमत देखाउन सके प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्न सकिने योजनासहित प्रधानमन्त्री ओली समूह यसको तयारीमा जुटेको छ । पार्टीभित्रैबाट आफूमाथि प्रहार हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद र पार्टी दुवैतिर आफ्नो बहुमत जुटाउने प्रयास गरेका छन्।
नेकपाका १ सय ७४ सांसद छन् । पूर्वएमाले समूहको १ सय २१ र पूर्वमाओवादी समूहका ५३ सांसद छन् । संसदीय दलमा बहुमतका लागि ८८ सांसद आवश्यक पर्छ ।
पूर्वएमाले समूहमा पनि प्रधाननमन्त्री ओलीको पक्षमा मात्रै ७८ सांसद रहेको यो समूहको दावी छ । वरिष्ठ नेता नेपाल समूह (झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसहित) ४३ सांसद भएको दावी छ । यसरी नेपाल–दाहाल समूहमा ९६ सांसद रहेको दावी गरिएको छ । ओली समूहबाट करिब एक दर्जन सांसद जोडिँदा एक सय नाघ्ने हिसाब दाहाल–नेपाल समूहको छ ।
बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । यस हिसावले बहुमतका लागि आवश्यक १० सांसदको हिसाव किताव र दाबी पेश गर्न हस्ताक्षर सहित सचिबालय बैठक बस्नुले नेकपाको राजनीतिमा ठुलो अर्थ राखेको छ ।